ajụjụ B773ER Nsogbu
1 afọ 10 ọnwa gara aga #294 by Dariussssss
OK, i enwe Kacha ọhụrụ B773ER Philippines site ebe a, na e nwere nsogbu na hydraulics. Otu n'ime ndị na usoro, yiri efu, n'agbanyeghị ihe m na-eme, ọ na mụ dị ka nke ahụ. N'ihi na, M nnọọ sonso enwe ike iduzi nyawa ya n'ala. Ihe ọ bụla ọzọ yiri OK, ọ ijiji mma.
Na elu ECAM ihuenyo, e nwere ihe a na ndepụta nke njehie na hydraulics. Ha niile nwere ihe na-eme na hydraulics usoro C, na na ala ECAM, onye ahụ bụ n'ezie efu.
M na-enwe a B772 mkpọ ibudatara na ebe a, na a otu VC, ma na-enweghị njehie.
Ya mere, n'ụzọ ọ bụla iji idozi nke a?
1 afọ 10 ọnwa gara aga #354 by Gh0stRider203
Ọkụ na mmezi ụmụ okorobịa, ma na-a ọhụrụ ndi oru ugbo?
All egwu egwu iwepụta ... mwute ikwu na m na-adịghị a nnụnụ, otú e nwere ihe bụghị ọtụtụ na m nwere ike ime.
Ị ele anya na niile ogwe ke mbuari?
Oge ike page: 0.102 sekọnd